कसरी प्राप्त गर्ने क्याल्सियम ? – Etajakhabar
कसरी प्राप्त गर्ने क्याल्सियम ?
एजेन्सी । हरेक मानिसमा क्याल्सियम निकै महत्वपूर्ण छ । क्याल्सियमले मांसपेशी बलियो बनाउनुका साथै हड्डी पनि दरिलो बनाउँछ । क्याल्सियमको प्रमुख स्रोत भनेको दूध र दुग्धजन्य उत्पादन हो । त्यसो त दूधबाट मात्रै क्याल्सियम पाइन्छ भन्ने होइन । दुग्धजन्य उत्पादनबाहेक हाम्रो शरीरलाई आवश्यक क्याल्सियम पाउन केही खाद्य उत्पादन पनि लिन सक्छौँ । हामी धेरैले क्याल्सियम भरपूर मात्रामा पाइने स्रोत खान सकिरहेका छैनौँ । जसले गर्दा विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य भएका छौँ ।
भटमास विभिन्न सांस्कृतिक पर्वमा भटमास टुसा आउने गरी भिजाएर दालका रूपमा खाने चलन अझै पनि छ । टुसा पलाएको भटमासमा प्रशस्त मात्रामा क्याल्सियम पाउन सकिन्छ । तिल क्याल्सियम प्राप्त गर्न तिल खान सकिन्छ । तिल त्यसै खाने भने होइन । यसलाई विभिन्न माध्यमबाट खान सकिन्छ । तिललाई अचारमा प्रयोग गरेर पनि खान सकिन्छ । तिल शक्तिवद्र्धक खाद्य सामग्री हो । यसमा क्याल्सियमको मात्रा प्रशस्त मात्रामा पाउन सकिन्छ । माछा धेरैलाई थाहा छ– नियमित माछा खाने हो भने हरेक मानिसको स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्छ । माछामा क्याल्सियम पाइने भएकाले पनि माछा खान चिकित्सकहरू पनि सुझाब दिन्छन् । आजभोलि माछा पाउन त्यत्ति दुःख हुँदैन । व्यावसायिक रूपमा जहाँकहीँ पनि माछा पाल्न थालिएको छ । विभिन्न प्रकारका माछाहरू समयअनुसार खाने हो भने क्याल्सियम पाउनुका साथै स्वस्थ हुनसमेत मद्दत गर्दछ । काँक्रो काँक्रोलाई उत्ति साह्रै बेवास्ता गर्नुहँुदैन । काँक्रोमा पर्याप्त मात्रामा क्याल्सियम पाउन सकिन्छ । काँक्रोसँगै बन्दाबाट पनि क्याल्सियम निकै पाउन सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन् । बदाम मानिसलाई शक्ति दिने खाद्यवस्तुमध्ये बदाम पनि एक हो । यसमा मिनरल र क्याल्सियम दुवै उच्च मात्रामा पाइन्छ । एक मुठी बदाममा ७२ मिलिग्राम क्याल्सियम पाउन सकिन्छ । निरन्तर बदाम खाने मानिसहरूले पर्याप्त मात्रामा क्याल्सियम पाउन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । ब्रोकाउली ब्रोकाउली पनि क्याल्सियम पाउने ठूलो स्रोत हो । ब्रोकाउलीलाई तरकारीको माध्यमबाट लिन सकिन्छ ।नयाँ पत्रिकाले छापेको छ । भिन्डी भिन्डी निकै मिठो तरकारी पनि हो । यसको तरकारी खाने हो भने भरपूर मात्रामा क्याल्सियम पाउन सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन २९, २०७४ समय: ८:३१:१०